Sirni Baallii Walharkaa Fuudhuu Eegale – Oromedia
Home » Uncategorized » Sirni Baallii Walharkaa Fuudhuu Eegale
Sirni Baallii Walharkaa Fuudhuu Eegale
February 28, 2017 @oromedia 0 Uncategorized,
(Oromedia, Finfinnee, Gurraandhala 28, 2017) – Sirni wal-harkaa fuudhinsa Baallii Gadaa Oromoo Booranaa har’aa jalqabee guyyoota saddeettan itti aananiif ardaa Jilaa BADHAASAAtti geggeeffama.
Abbaa Gadaa Kuraa Jaarsoo Diidoo, AG 71ffaa
Ardaan jilaa sirni kun itti gaggeeffamu aanaa AREEROO GOOROO MAGAALAA MATA GAFARSAA dhaattuu ardaa jilaa BADHAASAA jedhama.
Abbaan Gadaa ka Baalli kennuu Guyyoo Gobbaa Bulee, Abbaa Gadaa 70ffaa kan bara 2009-2017 ta’uun tajaajilaa ture.
Yerooo ammaa kana immoo Baallii Gadaa fuudhee waggoota saddeettan dhufaniif Abbaan Gadaa Oromoo Booranaa ta’uuf ka Baalli fuudhu Abbaa Gadaa Kuraa Jaarsoo Diidoo (A.G 71ffaa) ti.
Akka gabaasaan keenya eeretti, yoo ammaan tana ardaan Areeroo Gooroo fi ardaan jilaan BADHAASAA Booranaa Liibanii, Dirree fi Wasoo dhufee fi Oromoota godinaalee adda addaa irra dhufaniin guutameera.
Akkasumas dhalattoota Oromoo Booranaa kanneen Yuunivarsitiiwwan biyya keessa fi biyya alaa irra dhufaniin qophiileen adda addaa geggeeffama jira.
Lafa Booranaa keessa sayeessi wayilleen ganama kana waan bahee jiruuf qilleensi lafalleen qabbaana’a dansaa. Oromoon Booranaa fi Bareentuu hedduun jilaa tana irratti argamaniiru.
Sirni walharkaa fuudhiinsa Baallii Gadaa Oromoo Booranaa kun marsaa 71ffaaf kan gaggeeffamuu dha. Sirnichis godina Booranaa aanaa Areeroo Ardaa Jilaa Badhaasaatti gaggeeffama.
Abbaa Gadaa Guyyoo Gobbaa
Sirna kanaan Booranni aanaa Areeroo Ardaa Jilaa Badhaasitti wal-ga’eetu bara bulchiinsa Abba Gadaa Guyyoo Gobbaa geggeessa; bara bulchiinsa Abbaa Gadaa haaraa Kuraa Jaarsoo immoo simata.
Abbaa Gadaa Oromoo Booranaa 71ffaa, Kuraa Jaarsoo Diidoo, bara 2017-2025 Abbaa Gadaa Booranaa ta’uun ummata Oromoo Booranaa bulchan.
Biiroon Aadaa fi Tuuriizimii Oromiyaa sirnicha irratti kitaabbilee dhimma seenaa Oromoorratti xiyyeeffatan lama kan ebbisiisu ta’uun beekameera.
Sirni wal-harkaa fuudhinsi Baallii raawwatamuun duratti jalqaba irraa eegalee, Jiloonni gurguddoon kan akka lallaba Meendhichaa, Sirba Doorii, Sirba Raabaa, Jila Odaa Buluu, Muuda Qaalluu, Galma Dhawaa Maxxaarrii, fi Galma Dhawaa Dhaamsaa raawwatameera.
Ardaan Badhaasaa godina Booranaa aanaa Areeroo ardaa Haroo Diimtuu keessaatti argama. Ardaan kun magaalaa guddittii godina Booranaa Yaa’a Balloo irraa gara bahaatti fageenya km 95 irratti argama. Aanaa Areeroo irraa gara dhihaatti km shan irraatti argama.
Ardaa badhaasaa jechi jedhu badhaadhina jecha jedhu irraa dhufe. Jiltii Ardaa kanatti jilatamtu jila badhaadhinaa, nageenyaafi misooma barbaaduu ti; jila jiru jireenya amansiisaa jiraachisuu ti; jila nagaa Booranaa ti; jila nagaa Oromoo ti. Jilti kun kan bilisummaa, nageenyaa, misoomaafi badhaadhinaa waan taateef ardaa kanaan badhaasa jedhanii kan moggaasan.
Previous: Gadaan Oromoo Booranaa Jilatti Jira.
Next: Sirni Cidha Goobsuu Abbootii Gadaa Karrayyuu Gaggeeffamaa Jira